OROMUMMAA fi SABBOONUMMAA vs ITOOPHIYUMMAA fi AMAARUMMAA – Ayyaantuu Online
[ July 25, 2021 ] Galmee Seenaa Wareegamtoota Ilmaan Oromoo	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooOROMUMMAA fi SABBOONUMMAA vs ITOOPHIYUMMAA fi AMAARUMMAA
Berhanu Hundee, Bitootessa 29, 2020
Dhimmootni mata dureerratti lakkuu lakkuudhaan garee lamatti bahan kun faallaa walii akka ta’an osoo hin ibsin dura mee hiika isaanii gabaabsinee haa laallu. Oromummaas ta’ee Amaarummaan utubaalee (pillars) sadi qabu. Isaan kunis Afaan, Aadaa fi Seenaa dha. Isaan sadeen kun walitti yoo hidhaman immoo “Eenyummaa (Identity)” ibsu. Gabaabatti, Oromummaas ta’ee Amaarummaan eenyummaa saba sanaa ti jechuu dha. Sabboonummaa fi Itoophiyummaa yoo laalle immoo, Sabboonummaan utubaalee sadeen kana beekuu, jaalachuu, kabajuu fi isaaniif dursa kennuu dha. Asirratti wanti hubatamuu qabu, waan ofii tokko sirriitti beekuun, jaalachuu fi isaaf dursa kennuun kan biraa jibbuu akka hin taanee dha. Kun keessumaayuu Sabboonummaa Oromoo laallata.
Haa ta’u malee, Sabboonummaa Oromoo fi Sabboonummaa Amaaraa ykn Itoophiyummaa walbira qabnee yoo laalle, Sabboonummaan Amaaraa fi Itoophiyummaan kallattiidhaanis ta’ee al-kallattiidhaan fedhii akkasuma kana birallee dabree olaantummaa saba tokkoo akka calaqqisu ragaalee hedduu dhiyeessuun ni danda’ama. Amanamus amanamuu baatus, fudhatamus dhiisamus Itoophiyummaan Amaarummaa halluu biraa dibatee mul’atuu dha. Keessi isaanii tokkuma; fedhiin isaaniis akkasuma. Kanaafuu, Amaarummaa fi Itoophiyummaa gargar baasanii laaluun hubannoo dhabuu dha. Itoophiyummaan tooftaa Amaarummaan ittin hojiirra ooluu dha. Maqaa Itoophiyaatiin sabaa fi sab-lammootarratti eenyummaa Amaaraa (Amaarummaa) fedhuu yaaluu dha.
Asirratti warra dhimma kana hin hubanneef ibsuuf, Oromummaa fi Sabboonummaa walbira qabnee yoo laalle, Sabboonummaa akka dhiphummaatti warri laalan waan jiraniif, kun sirrii miti. Sabboonummaan guddina sadarkaa ol’aanaa Oromummaa ti. Sabboonummaan gabaabumatti bilchina Oromummaa qabaachuu dha. Akkuma kanaa oliti ibsame, Oromummaa jaalachuu, kabajuu fi isaaf dursa kennuutu Sabboonummaallee guddisa jechuu dha. Akkuma jedhame, Sabboonummaan guddina sadarkaa ol’aanaa Oromummaa ti yoo jedhame dhara hin ta’u. Oromoo ta’anii dhalachuu fi Oromummaa beekuunis garaagarummaa guddaa qaba. Kanaafuu, abalu Sabboonaa ykn Sabboontuu dha; abalu immoo Sabboonaa ykn Sabboontuu miti jedhama malee, eenyummaa uumaa waliif kennuu fi walirraa fudhachuufii miti.
Sababni guddaan Sabboonummaarratti duulamuufis waanuma Sabboonummaan Oromoo Oromummaa jaalatu fi isaaf dursa kennuuf malee, akka ololamutti Sabboonummaan Oromoo biyyattii tanaafis ta’ee saboota fi sab-lammootaaf gaaga’ama ta’eetii miti. Sabboonummaan Oromoo fedhii saba Oromoo guutuuf furtu ta’us, fedhii uummattoota biroo ni faallessa jechuun dogongora guddaa dha. Biyyattii tana ni diiga kan jedhamus, ololaa fi malee dhugaa miti. Sabboonummaa Oromootu har’a biyyattii tana harka Wayyaanotaatii akka baase fi jijjiirama qilleensaa akka fide maaliif dagatama? Kun dhugaa lafarra jiruu fi Addunyaanillee beektuu dhaa bar!!
Dhimmuma kana wajjin walqabatee, Oromoonni tokko tokko maaliff Itoophiyummaa akka faarsani fi Sabboonummaa akka balaaleffatan yeroo biraan itti deebi’a.
Soorettii Caalaatiin Namoomaa hayyoota jedhaman osoo hin dabalatee Oromoon hedduu Har'a Kaayyoo QBO Karaa dalgaa…